Ogaden News Agency (ONA) – Sanadkii 2014ka Waxay JWXO ku Sagootisay Guulo Waaweyn
Sanadkii 2014ka Waxay JWXO ku Sagootisay Guulo Waaweyn
Posted by ONA Admin	/ January 1, 2015
Wuxuu caalamka sagootiyay sanadkii miilaadiga ee 2014, wuxuuna soo dhaweeyay sanadka cusub ee 2015ka. Waxaa ka mid ah munaasabadaha lagu sagootiyo sanadkii tagay in dib loo fiiriyo hawlihii u qabsoomay Haya’adaa/Ururkaa/Xisbigaa/Xukuumadaa, iyo dhib iyo dheef wixii soo gaadhay. Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) waxaa dhaqan u ah in heerarka kala duwan ee ururka loo xisaabtamo oo la qodobeeyo wixii sanadkaa la qabtay ee Horumar iyo Hoosudhac ah.
Sanadka 2014ta wuxuu ahaa sanad xusuus fiican kaga tagay ururka JWXO iyo guud ahaan halganka gobanimadoon ee shacabka Somaliyeed ee Ogadenya.
Gudaha waxay Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya kor u qaadeen weeraradii ay dalka kaga xoreynayeen ciidamada isu-keen-keenka ah ee Gumaysiga Itobiya. Weerarada joogtada ah ee CWXO ay ku hayaan cadawga waxay kaliftay inay marar badan dhexdooda iska laayaan ama gawaadhida ay la rogmadaan iyagoo ka cararaya jidgooyo loo dhigay ama weerar lagu qaaday kolonyo meel mareysa. Hadaan tusaale ahaan usoo qaadano lixdii bilood ee ugu dambaysay sanadka waxay CWXO ku fuliyeen cadawga 271 Hawlgal (Operation), oo intooda badan ahaa weerar lagu qaaday fadhiisimahooda. Hawlgaladaa waxaa ka mid ahaa hawlgalo si gaar ah loo qorsheeyay oo lagu qaaday fadhiisimada cadawga uu ugu talagalay inuu ku ilaaliyo shirkadaha shidaalka. Haddii lix bilood loo qaybiyo waxay noqonaysaa in bishhiba ay fuliyeen N/hurayaasha CWXO 45 hawlgal ciidan. Waxaan meesha ka maadhnayn isku dhac badan oo aanay nasoo gaadhin warbixintooda oo siyaaba kala duwan uga dhex dhaca cadawga iyo N/hurayaasha. Hawlgaladaa waxaa cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare laxaad leh oo isugu jira bakhti iyo dhaawac aad u badan oo tirakoobkooda lagusoo gudbin doono warbixinta guud ee CWXO.
FG: Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ma jecla dhiiga shacabka dariska ah ee isku daadanaya, hasa ahaatee, sida ku xusan dhamaan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah waxay xaq u leeyihiin shacabka Ogadenya inay wada kasta oo suurtagal ah u maraan siday u hanan lahaayeen xoriyadooda. Waxay JWXO dusha ka saareysaa dhiiga ku daadanaya Ogadenya gumaysiga Itobiya oo diiday in waxaan xabad ahayn la’isku fahmo.
Sidii dhaqanka u ahayd gumaysiga Itobiya, waxay jabka kasoo gaadhaya goobaha dagaalka ku qarisaa xasuuq iyo xad-gudub aan lasoo koobi karin oy ku hayso dadka shacabka een hubaysnayn. Tirakoobka laga hayo dadka shacabka ah ee ciidamada Itobiya iyo maxaysatada la socota ay toogteen, ama xidheen, ama ka dhaceen xoolahooda, ayaa loo gudbiyay haya’adaha caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha u dooda. Waxayna ka mid tahay taariikhda murugada leh ee Itobiya ay u gaysatay shacabkeena.
Hadaan intaa kaga gudubno hawlgaladii CWXO ee sanadkii 2014ka, sidoo kale waxaa ka socday dibadda halgan adag oo jaaliyadaha S.Ogadenya ay ka wadeen. Xusuuta sanadka 2014ka ee Jaaliyadaha ay qabteen waxaa ka mid ahaa;
1- Xuskii SodonGuuradii kasoo wareegatay Asaaska JWXO 1984 oo dunida dacaladeeda si fiican oo taariikhi ah looga xusay. Iyadoo Xuskii Ugu Weynaa oo Lagu Qabtay caasimadda UK ee London.
2- Banaanbaxo meela kala duwan ka dhacay oo caalamka lagu ogaysiinayay dhibka lagu hayo shacabka Ogadenya iyo halganka ka socda Ogadenya.
Banaanbax Looga Soo Horjeedo Gumeysiga Ethiopia (Oslo Norwey)
3- Shirar jaaliyadeed oo heerar kala duwan ahaa.
4- Bandhig-faneedyo lagu muujinayay Dhaqanka iyo Hidaha shacabka Somaliyeed ee Ogadenya oo meela kala duwan laga dhigay.
5- Siminaaro iyo aqoon-isweydaarsi loo qabtay haya’adaha kala duwan ee ururka iyo hawl-wadeenada jaaliyadaha.
6- Socdaalo ay madaxda sare ee Jabhadda ku tageen meela kala duwan oo caalamka ka mid ah, halkaasoo ay kula kulmeen siyaasiyiin iyo jaaliyadaha halkaa ka dhisan.
7- Shirweynihii lagu Dhisay Ururka Haweenka Ogadenya oo ahaa ( Khitaamuhuu Misk) ayaa lagu sagootiyay sanadka 2014.